Waa maxay Tababaraha xijaab?
Su'aasha u kacaya ugu horreeya oo dhan arrintan la xiriira waa in wixii dhab ahaan Xijaab Aeraafkana disk yahay? In erayada fudud iyo xijaab af laawe waa meel macquul ah oo ku saabsan drive adag ama nooc kasta oo saxaafadda lagu kaydiyo oo loo isticmaalo si ay u hubiyaan in files OS ah ay ku kaydsan yihiin si ay laga heli karaa sida iyo marka loo baahdo. Waxaa sidoo kale in la xuso in xijaab disk uusan amateurs iyo sidaa darteed waa in la soo baxay xirfadlayaasha si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay ahbaa. Sidaa darteed barnaamijyada software xijaab Disk hubiyo in guud ahaan arrin Risaalo iyo sidoo kale fulinta ee hawsha loo sameeyaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ka dhigi. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in hawsha la qabanayo sida habka sanyihiin taas oo u sahashay u user in uu ka qayb drive oo aan wax arrin oo dhib.
Top 10 maamulayaasha xijaab
Ka dib waa 10 maamulayaasha xijaab sare taas oo shaki ka dhigi lahaa nolosha user sahlan:
Maraykanka fududee Tababaraha xijaab
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la tixraacayo Risaalo taas oo ka dhigaysa hubiyo in user ma aha oo kaliya helo natiijada ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale u qabata hawlo kala duwan marka ay timaado kala dillaacay drive adag. Waxa kale oo uu leeyahay shaqeynta ah oo gundhig ah NTFS in ay diinta ka buuran iyo qeybsanaan ku xigeenka si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ka mid ah diinta iyo nidaamka joogo amaan iyo ilaa sumadda aan arin kasta.
Joogto la casriyeeyay ay ku dhiirigelinayaan in uu
Barnaamijku wuxuu ku iman mayso CD kabashada taas oo con kaliya ee arrintan la xiriira ah.
Barnaamijkan qaban karaan shaqo kasta user a ka fikiri karaa oo sabab la mid ah ka xijaab inay ku biirtay barnaamijka ayaa had iyo jeer la siiyaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in barnaamijka waxa lagu xiraa sida tilmaamaha in timaaddo sida waxaa laga yaabaa in xeelad badan qaar ka mid ah dadka isticmaala cusub ee arrintan la xiriira.
Easy in ay isticmaalaan interface waa user saaxiibtinimo
Mashiinka boot Dual sidoo kale la abuuri karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijkan
Barnaamijka waa mid adag oo adag u isticmaala laylis.
Macquulka ah Barzakh,
Mid ka mid ah mashaariicda il xor ah oo furan oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in xijaab disk iyo hawlaha kale ee la xiriira waxaa lagu sameeyey si fudud oo toos ah hab, waxa ay sidoo kale hubisaa in user waxaa lagu hanuuniyey ka badan talaabo kasta si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan ahbaa iyo xijaab arrin guud ahaan waa wax fudud oo sahlan in ay isticmaalaan. Isticmaalka barnaamijka hubaal ka dhigi doonaa hubiyo in Risaalo ma aha ciyaar oo dhan.
Barnaamijku waa il furan taas oo micnaheedu yahay in user ka soo dejisan kartaa qalabka oo lacag la'aan ah.
Isticmaalka barnaamijka uu yahay mid fudud oo aan adag in mid ka mid ah dhinacyada ay
Barnaamijka wuxuu leeyahay xadeynta oo la tixgelinayo shuruudaha nidaamka iyo hardware arrintan la xiriira.
Tababaraha xijaab cute
Barnaamijka wuxuu leeyahay interface DOS ah ay sabab u tahay taas oo aan la jeclaa ay users laylis laakiin weli waxa ay leedahay rating wanaagsan guud ahaan si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka la eego xijaab disk ah. Barnaamijka waxaa kale oo uu leeyahay dhowr hawlood oo kale in u gargaartaan user halka geeddi-socodka Risaalo ka sii gaar ah. Gacanta is iyo qalabaynta yihiin qaababka ugu fiican ee ka mid ahaa.
Barnaamijka wuxuu leeyahay interface fudud waa u fududahay in la isticmaalo.
Isbedelada u sameeyey oo drive la arki karin hor inta aan la badbaadiyey.
Barnaamijka wuxuu leeyahay ma muuqaalada ka hor sida resizing oo ku biirtay qoruhu
Waxa aan la updated sanado badan.
Tababaraha xijaab Ranish
Orodka ee interface line amarka barnaamijkan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo tan gobolka ee barnaamijka fanka in la hubiyo in user helo natiijada la doonayo oo aan wax arrin oo dhib ka dhigi lahaa. Waxay ka dhigaysa hubiyo in xijaab lagu sameeyo oo waafaqsan shuruudaha user iyo arrin guud waxa kale oo si fiican loo.
Gacanta user ayaa eego waa heer sare
In la sameeyo nidaam boot kala duwan waa suurto gal.
Wixii bilowga ah barnaamijkan waa adag tahay in ay isticmaalaan oo ay u maareeyaan xijaab drive adag.
Tababaraha disk adag Paragon
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo sare barnaamijyada lagu qiimeeyo oo duurka ku ah maamulka xijaab drive adag. Iyada oo abaalmarino kala duwan saaran kooxda horumarinta barnaamijkan ayaa xaqiijiyey in ugu fiican oo gobolka ka mid ah arrin tahay waa wax la siiyaa user ee la xiriirta mawduuca. Waxaa u qabata hawl kasta oo la xiriira in ay xijaab drive adag in user a qabaa karo.
Barnaamijku wuxuu ku keenaa qiimaha ugu sareeya si user ah marka la eego shaqada.
Isticmaalka waa mid aad u fudud oo dhan isticmaala arrintan la xiriira.
Barnaamijka waxaa loo isticmaalaa oo keliya xirfadlayaasha sida liisanka qof ahaaneed waa mid aad u qaali ah.
Agaasimaha disk Acronis
Barnaamijku waa mid ka mid ah kuwa maamulayaasha qoruhu in la soo bixi ugu laakiin weirdly ratings ma u sarraysaa sida in ay ahaadaan. Laga soo bilaabo xijaab disk inay ku biirtay iyo ka disk taabato in ay xijaab maamulka barnaamijkan waa inuu xaqiijiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican yahay in la qabto.
Interface waa gui ku salaysan oo halkan ka fududahay in la isticmaalo.
User ayaa u fuliyey hawlaha badan waqti isku mid ah.
Barnaamijka waxaa lagala soo bixi dhowr xayeysiis taas oo con kaliya marka ay timaado dajinta.
Tababaraha xijaab O & O
Barnaamijka ayaa ku qoran mid ka mid ah barnaamijyada oo kaliya in ka dhigi lahaa arrin ku disk maamulka xijaab u fududahay user. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi ka dib markii reading dib u eegista si taxadar leh knitted arrintan la xiriira sida sawirka cad ee diinta ku salaysan dib u eegista weli waa la go'aamiyo sameeyo.
Waxaa u qabata dhamaan hawlaha Risaalo la xiriira sida la tirtiro, biirtay iyo abuurista.
Barnaamijka waxaa la joogto ah la casriyeeyay si ay u dhigma baahida dadka isticmaala ku.
The feature baaritaan caafimaad weli in lagu daro barnaamijka ee la xiriirta in la shaqeynayaan.
Waxaa jiilka xiga boot Terabyte
In kastoo software ayaa ku qoran mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka of farshaxanka in la hubiyo in Risaalo si fudud lagu sameeyey, laakiin weli waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in user helo natiijada sida ballamo barnaamijkan. Waa mid ka mid ah barnaamijyada sidoo kale ka dhigi lahaa hubiyo in user helo heshiiska ugu fiican ee ka kaaftoomi badan aan.
Isticmaalka barnaamijka waa u fududahay in la maareeyo oo u fuliyaan.
Dhowr Casharrada waxaa jira online si ay u hubiyaan in isticmaalka barnaamijka lagu sharaxay.
Xirxiro barnaamijka uu yahay mid aad u badan ku adag tahay nooca dhammaan dadka isticmaala.
Tababaraha disk track Kroll On
Haddii user a doonayo in uu sameeyo habka maamulka disk u fududahay in la xuso in barnaamijka sakhiray waa in lagu xiro maadaama ay hubineysaa in user helo geeddi-socodka maamulka disk sharaxaadda sahlan oo iskood. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka waa u fududahay in la isticmaalo iyo rakibo sidoo kale waa mid aad u graphic samaynta habka xitaa fudud.
Maamulka disk waxaa loo sameeyaa hab iswada si faragelinta user waa ugu yaraan.
Xarunta baaritaan caafimaad ayaa jira si loo hubiyo qaladaad ku disk ka.
Maqnaanshaha feature kabashada xogta waa con kaliya ee barnaamijkan.
> Resource > Ladnaansho > Top Tababaraha 10 xijaab - software xijaab drive adag ugu wanaagsan